China CE ISO Certified 5ton-30ton crane teleskopika tariby vita amin'ny varotra vitaina ao Shina HABIDIANA orinasa sy mpanamboatra | marina
CE ISO Certified 5ton-30ton crane teleskopy tariby vita amin'ny tanety vita any Chine HAMIDINA
Ny orinasanay dia mamokatra vano kamiao 5ton-30ton, mandray ny marika chassis malaza. Misaraka ny taxi cab sy ny taxi operator. Ny tombony dia ny crane manana fivezivezena tsara, fahamendrehana avo lenta ary serivisy aorian'ny fivarotana, sns.
Ny famolavolana ny crane iray manontolo dia mitombina kokoa noho ny karazana crano hafa, mitahiry akora ary manome fahafaham-po ny fepetra takiana.
Karazan-tsarety vaovao, seza fampiatoana azo ovaina, fanalefahana motifika, fantsom-pifandraisana elektrika sy hydraulic ary fanaraha-maso ny bokotra, fisehoana loko lehibe sy dashboard vaovao, fanaraha-maso herinaratra H, herinaratra fanaraha-maso herinaratra, boaty fanodinana herinaratra fanodinana herinaratra, familiana familiana herinaratra axle, fandidiana mora foana, azo antoka ary azo itokisana.
• Fampisehoana mitarika: ny halavan'ny fisondrotana amin'ny fanitarana feno dia 32m, ny fiakarana mitarika 5%. Ny fahaizan'ny kilasy dia 40%, izay mahatonga ny masinina hanana ny fahaiza-mampifanaraka ny arabe.
• Ny lohan'ny boom U sy plug-in boom mampiavaka azy dia mahatonga ny fahafaha-mitondra entana ho voalanjalanja kokoa ary hampiakatra moramora kokoa.
• Ny teknika manitatra sy misintona tsy manam-paharoa manakana ny tsy fandidiana; ny fihenjanana sy ny fihemorana ny fipoahana dia azo antoka sy azo itokisana kokoa.
• Ny rafitra fanaraha-maso dia manatsara ny patanty 8; mora sy azo ianteherana ny fampiakarana, ny fihodinana ary ny fametahana.
• Teknolojia tokana enina no manome antoka ny kalitao ary mahatonga ny vokatra hitazona lanja avo lenta.
• Ny rafitra jib manavao dia mandray ny sakana miorim-paka, lohan'ny boom-plug-in ary jib octagon, izay manana fiakarana tsara sy fiakarana azo antoka sy azo antoka.
• Ny teknika manitatra sy misintona tsy manam-paharoa dia misoroka ny famoronan'ilay fantsona sy varingarina fototra ary ny fahatapahan'ny fipoahana vokatry ny fandidiana diso, fanatsarana ny fiarovana ireo asa.
• Teknika patanty valo miantoka ny filaminana, ny fahombiazana avo lenta ary ny fitehirizana angovo an'ny rafitra fananganana, fihodinana ary famokarana.
• Ampiasao ny motera hydraulic vaovao miaraka amina teboka fanombohana lehibe, hahatonga ny fananganana faharoa ho azo antoka kokoa.
• Ny limiter torque dia mandray fampisehoana LCD miloko, mahatsapa ny fahiratan'ny famaritana ny tsy fahombiazana. Mialoha ny indostria ny marina.
• Ny famolavolana ny maha-olombelona dia mahatonga ny cab sy ny cab cab control malalaka kokoa ary mora ampiasaina.
• Teknolojia famokarana enina tsy manam-paharoa miantoka ny kalitao avo lenta.
Item famaritana Description
Taratasy fiaviana Shina
Anaran'ny marika MARINA FOANA
Max. Fahaiza-manainga 16T
Max. Haavony miasa 38 m
Mekanisma fanitarana boom Boom teleskopika 5
Torque manainga 240 KN
Fahazoana mitaingina tokana
Main Hook: 16 taonina
Vatom-panampiana: 6 taonina
Haingam-pandeha Kaody lehibe: 135 m / min
Poka mpanampy: 85 m / min
Swing Bearing Sentra GB1000, Frequement intermien 50 micron
Tongotra Hydraulika mitsangana Varingarina solika mihetsika indroa
Tongotra marindrano Hydraulika
Tifitra solika hydraulic Mihantona eo ambanin'ny chassis, sivana efatra manokana
Pressure Gage & Switch Singa tsy mahazaka
Fanaraha-maso symmetry Axial Fifanarahana paompy telo
Fanamafisana boom Fanamafisana mandeha ho azy
mandoko Voatifitra ny fandefasana sary hosodoko tokana
Sehatra miasa Anti-skidding
Jiro amin'ny alina Jiro 3
Marika Dongfeng Truck Chassis
Massa feno amin'ny crane (kg) 16500
Dimension ankapobeny (mm) 10200 * 2300 * 3450 mm
kodiarana Model: 900-20 miaraka amin'ny
Tyro No.: Fito
Axle No. Iray
Isan'ny lohataona ravina 9/11 + faribolana 8
Làlan'ny kodia eo anoloana sy aoriana (mm) 1640/1650
Base Base (mm) 4300 mm
Engine Chassis an'ny kamio Modelin'ny motera: marika WeiChai
Angovo maotera: 92Kw / 2400rpm
Cylinder No. .: Efatra
Karazan-tsolika Menaka diesel
Hafainganana hitondra fiara 75Km / h
Braking System Vaky rivotra
mamily Karazan-tsolika fanampiana herinaratra
Toetran'ny rivotra Tafiditra
Auto / Manual boky fampianarana
Seza mitondra fiara Toerana ankavia
Loko Mavo na fotsy
Teo aloha: CE ISO Certified 5ton ka hatramin'ny 50 taonina vano marin-dranomasina vita vita sinoa vita any Chine HAMIDINA
Manaraka: CE ISO voamarina kamio 5ton-20ton mitaingina vano vita vita vita vita sinoa any Chine HIDINA
CE ISO voamarina kamio 5ton-20ton mitaingina vano ...